Munamato kuna Mutsvene Judha Thaddeus wezviitiko zvakaoma uye zvakaomarara. ?
Munamato ku Mutsvene Judha Thaddeus yezviitiko zvakaoma kwazvo uye zvekupererwa Pakati pezvikumbiro zvese izvo munhu angave nazvo, pane zviitiko zvakaoma kupfuura vamwe. Kune awa pane uyu munyengetero une simba.
Pano iwe haugone kukumbira zvinhu zviri nyore kana zvisina basa, kureva kuti, munyengetero uyu wakasarudzika kukumbira zvinhu zvisingaite sekuporesa kunoshamisa, semuenzaniso.
Mhosva dzehutano ndidzo dzinonyanya kuitika, zvisinei iwe unogona kukumbira chimwe chinhu.
Mune zviitiko apo pane vanhu vakashaika, vana kana vakuru, San Julius Tadeo vanokumbirwa kuti vavaratidze nzira yekudzoka kumba.
Chinhu chikuru iko kutenda kwakagadzirwa nahwo.
Kuve nekuda kuona chishamiso chinhu chakajairika, nguva zhinji pane mamiriro anoita sekunge akafufutirwa, asi mune izvi zviitiko munyengetero unogona kuve wega runyararo nerunyararo.
1 Munamato kuna Saint Judhasi Tadeo yematare akaomesesa uye anodikanwa Ndiani iye?
2 Namata kuna St. Jude Thaddeus yematare akaoma uye anodikanwa
3 Munamato une simba here?
4 Ndirini pandinofanira kunamatira munamato weSt. Julius Thaddeus?
Munamato kuna Saint Judhasi Tadeo yematare akaomesesa uye anodikanwa Ndiani iye?
Anozivikanwa nekuve musande uyo anotibatsira mune zviitiko zvinoita sepane mhinduro. Anotaurwa mumavhidhiyo eBhaibheri semumwe wevadzidzi gumi nevaviri vaJesu.
Kuva mumwe wevaapositori gumi nevaviri iye aive padyo naIshe panguva yaaive ari pasi pano mune chimiro chake che munhu.
Anowanzovhiringidzwa naJudhasi Iskarioti, uyo ndiye akapa Jesu kuvaFarise.
Judhasi Tadeo haana ruzivo rwakawanda rwekongiri runotiudza kwarwakabva, asi icho chinozivikanwa isimba raro rekupa zvishamiso zvisingaite.
Iye anoonekwa semusande anonyanya kufarirwa nhasi, saka zvakakosha kuti tizive zvishoma nezve nhoroondo yake.
Simba rake rekuita zvishamiso riri muchinhu chekuti anoshanda semurevereri pakati pedu naJesu, nenzira iyi zvinofungidzirwa kuti zvikumbiro zvinotora kukosha pamberi pechigaro chekudenga uye nekuda kweizvozvo vanopindurwa nekukasira kunyangwe zvakaoma sei kana zvakaoma chishamiso icho chiri kukumbirwa mu munamato.
Ah ane mbiri Apostle St. Judhasi! Muranda akatendeka uye shamwari yaJesu. Zita remutengesi rakapa Tenzi wako anodikanwa mumaoko evavengi vake ndicho chikonzero chekuti vazhinji vakukangwe. Asi Chechi inokudza uye inokukwazisa iwe zvakasiyana-siyana somutsotsi wematare akaoma uye anodikanwa.
Ndinyengeterere kuti ndiri munyarikani uye ndishandise, ndinokukumbira, iwe pamusoro peiyo runyararo rwawakapiwa iwe. Nekubatsira kubatsira kuoneka uye nekukasira kana tariro dzese dzikave dzakarasika.
Huya kuzondibatsira mune ichi chikuru chinodiwa.
Saka kuti ndigamuchire nyaradzo nerubatsiro rwekudenga mune zvese zvandinoda, matambudziko nekutambudzika, kunyanya (ita yega yeminamato yako inokosha pano). Uye kuti akomborere Mwari pamwe newe uye pamwe nevakasarudzwa vese nekusingaperi.
Ini ndinokuvimbisa, iwe unokudza Saint Judha, kuti ugare uchiyeuka iyi tsitsi huru uye handimbofi ndakamira kukukudza iwe semuchengetedzi wangu akasarudzika uye ane simba uye nekuita zvese zvandinogona kukurudzira kuzvipira kwako.
Zvirwere zvechirwere chakadai sekenza, tsaona dzinoshungurudza, vanhu vakashaika, humbavha, humbavha uye zvese zvikumbiro zvinonzi zvakawoma ndizvo izvo zvinofanirwa kugadziriswa kumutsvene uyu.
Iwe unofanirwa kunyatso bvunza zvaunoda kuwana, nekuti izvi unofanirwa kuziva nyaya yacho zvakanaka, hatigone kukumbira kuporesa mumwe munhu, zviri nani kunyatsonamata, uchishandisa zita remunhu uye zita rechirwere, semuenzaniso .
Nyanzvi mune dzakarasika zvikonzero, mune avo kesi vanhu vakarasa kutenda, apo pasina tariro.
Idzo inguva apo simba remushandirwi iri riripo. Nyanzvi mukununura kugona kutenda Musande anotibatsira kuchengetedza nekutora kutenda.
Munamato une simba here?
Chii chinoita munamato kuna St. Jude Thaddeus yezvakaomesesa uye zvishuviro zviitiko zvine simba ndiko kutenda kunoitwa nayo.
Izwi raMwari rinotidzidzisa kuti kana tikakumbira Baba kuti vatende ivo vachatipa chishamiso.
Naizvozvo tinogona kunzwisisa kuti ndizvo chete zvinodikanwa kuti mutsara uunze mhedzisiro. Kubvunza tisina kutenda kuti tinogona kuvimba nenyasha dzaMwari uye nerubatsiro ndiko kunamata pasina.
Hatigone kubvunza mumwe munhu watisingatendi kuti atipe izvo zvatinokumbira. Zvese izvo zvinobvunzwa zvinofanirwa kunge zvichitenda kubva mukati-kati memoyo.
Kutenda kwechokwadi Mwari, musiki wezvinhu zvese, achiri nesimba kutibatsira mune zvese zvatinoda uye anevatsvene vake kuti vamubatsire kuzviita, saka usazeza kunyengetera chero nguva paunoda.
Ndirini pandinofanira kunamatira munamato weSt. Julius Thaddeus?
Iwe unoda kuziva kuti iwe unofanirwa kunyengetera riini munyengetero une simba?
Unogona kunamatira munamato kuna St. Judha Thaddeus yematare akaoma uye anodikanwa pose paunoda.
Musande ane simba uyu anonzwa zvese zvaunokumbira, nekuti izvo zvakakwana kuti unamate nekutenda uye nekutenda kwakawanda mukati memoyo wake.
Iwe unogona uye unofanirwa kunyengetera mazuva ese pamberi pemubhedha kana mazuva ese paunomuka.
Kana iwe uine nguva, tinokurudzira kuti uvhenekese kenduru chena kuti upe kuSan Julius Tadeo.